🥇 aza ajụjụ maka akwụmụgwọ arụmọrụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 293
Vidio nke nyocha maka arụmọrụ kredit
Dezie ajụjụ maka arụmọrụ akwụmụgwọ
A na-edekọ azụmahịa mgbazinye na-akpaghị aka na USU Software, nke pụtara na azụmahịa ọ bụla mgbazinye ego ga-egosipụta ozugbo na akaụntụ ahụ na akwụkwọ niile metụtara mgbazinye ego, gụnyere akara ngosi agba, nke enyere na sistemụ arụmọrụ akpaaka iji hụ njikwa anya nke arụmọrụ niile. na-eme mgbe ị na-arụ ọrụ ego. A na-arụ ọrụ niile na-enweghị òkè nke ndị ọrụ, ya mere nkwenye nke 'nyocha akụrụngwa', nke na-eme ka ndekọ ego abụghị naanị ịrụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ọsọ nke ọrụ ọ bụla bụ obere nke abụọ, n'agbanyeghị agbanye data na nhazi, mana ọ dị irè naanị n'ihi oke zuru oke nke mkpuchi data ka edekọ. Ihe ọzọ duziri na mba Ẹkot.
A na-eme nyocha nke arụmọrụ kredit na ego mba ọzọ dịka otu ụkpụrụ si dị maka mgbazinye ego nkịtị, mana, dịka iwu, ndị otu ahụ kwenyere na iwu nke azụmahịa iji chetaghachi ịkwụ ụgwọ mgbe ọnụego mgbanwe nke ego mba ofesi nke ego a e nyere mgbanwe, ma ọ bụrụ na ndị mba ọzọ na-enwe oké mgbanwe. Ekwesiri ighota na kredit na ego ndi mba ozo, oburu na oge di mkpirikpi, bara uru karia igbazinye ego na ego mba ebe obu na enweghi mgbanwe ngbanwe na onu ogugu nke ego mba ofesi, oru na ego di otú a choro ugwo di ala karia nke mgbazinye ego n'okpuru ọnọdụ ndị yiri ya na ego mpaghara. Nhazi nke nyocha nke arụmọrụ kredit na-ekesa mgbazinye ego ‘mba ofesi’ na-akpaghị aka site na ụdị, nke kpebisiri ike site na ebumnuche nke ego mgbazinye ego ndị mba ọzọ, ndị na-agbazinye ego, nkwekọrịta, ma jiri aka ha na-eduzi ụdị ọrụ niile enyere maka ụgwọ ọrụ na ego mba ọzọ. Ọrụ ya gụnyere ịchịkwa oke nkenke nke kredit, mmezu nke oge na ha, na irube isi n'iwu nke mgbanwe mba ofesi.
Nhazi nke nyocha nke arụmọrụ kredit na ego mba ofesi ga-eleba anya na ọnụọgụ mgbanwe mgbanwe na ịkwụ ụgwọ ọmụrụ nwa, mgbanwe mgbanwe ọnụego na ịkwụ ụgwọ ụgwọ isi site na ụbọchị ịkwụ ụgwọ, dịka usoro nhazi maka ha, nke bụkwa emeputa nke onwe site na nhazi. Na-achịkwa ego mba ọzọ, karịa, nlekota nke ọnụego ha ugbu a, sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ma, ọ bụrụ na ha na-agbanwe nke ọma, na-eduzi ọrụ ozugbo iji gụghachi ụgwọ dịka ọnụego ọhụrụ ahụ si dị, na-agwa ndị ahịa banyere nke a na akpaghị aka site na ndị kọntaktị ndị ahụ bụ E gosipụtara na nchekwa data, ma ọ bụrụ na arụnyere ngwanrọ na ụlọ ọrụ ego.
A na-enyocha ndekọ nke arụmọrụ na ego ndị mba ọzọ mgbe ị na-ewepụta ego kredit, n'oge arụmọrụ ịkwụghachi ma ọ bụ mgbe a laghachiri ha. Iji kwado azụmahịa niile, edebara aha ha na ndekọ eletrọnịk ebe ọ bụ na mmemme a na-ejikwa njikwa akụ na ụba, na-edepụta ụdị pụrụ iche nke na-edepụta azụmahịa ahụ, nke emere n'oge oge akụkọ na nkọwa zuru ezu maka onye ọ bụla n'ime ha, na-edozi ụbọchị, ala , ndị nnọchiteanya, na ọnụọgụ nke ndị ọrụ ahụ.
Vingchekwa ihe onwunwe, nke kachasị mkpa bụ oge na ego, bụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụ, ya mere, ọ na-eme ka usoro niile dị mfe dị ka o kwere mee na, si otú a, na-agba ha ọsọ, na-ahapụ ndị ọrụ naanị otu ọrụ - ntinye data, isi na nke ugbu a. Iji dekọọ ozi ndị ọrụ natara n'aka, ntụkwasị obi ya na arụmọrụ ya, a na-enye akwụkwọ akụkọ elektrọnik nke ọ bụla, nke ndị ọrụ na-ezigara ozi gbasara omume ha rụrụ na arụmọrụ nke ọrụ. Dabere na ozi a, sistemụ na-akpaghị aka na-agagharịghachi ihe ngosi ndị na-egosipụta ọnọdụ ọrụ ugbu a. Dabere na ihe ngosi emelitere, a na-eme mkpebi nchịkwa iji nọgide na-arụ ọrụ n'otu ọnọdụ ahụ ma ọ bụ iji dozie usoro ọ bụla ma ọ bụrụ na ntụgharị nke ihe ngosi ahụ sitere na atụmatụ ahụ ezuola. Ya mere, ọrụ ọrụ nke ndị ọrụ ahụ dị mkpa, nke usoro nyocha na-enyocha mgbe ị na-agbakọ ụgwọ ọrụ ndị ọrụ na njedebe nke oge ịkọ akụkọ.
Ihe omume a n’onwe ya na-agbakọ ụgwọ ọrụ kwa ọnwa nke onye ọrụ ọ bụla, na-atụle ogo nke ozi etinyere na ndekọ ọrụ, yabụ ndị ọrụ nwere mmasị na mgbakwunye oge nke data na ntụkwasị obi ha. Njikwa ihe ọmụma sitere n'aka ndị ọrụ na-arụ site na njikwa na sistemụ n'onwe ya, na-emegharị ọrụ ndị a, ebe ọ bụ na ha nwere usoro dị iche iche nke nyocha, si otú a na-emeju ibe ha. Ndị ọrụ ahụ na-enyocha ndekọ ndị ọrụ maka nnabata na ọnọdụ ọrụ ugbu a, nke ha ji arụ ọrụ nyocha, nke na-egosi kpọmkwem ozi agbakwunyere na sistemụ ahụ kemgbe nyocha ikpeazụ wee, ya mere, na-eme ya ngwa ngwa. Usoro njikwa kredit na-ejikwa njikwa banyere ndị na-egosi ya, na-edobe ịnọ n'okpuru ha, nke ewezuga njehie.
Usoro mmemme nke arụmọrụ kredit na-ewepụta ọtụtụ ọdụ data, gụnyere akara ngwaahịa, onye ahịa CRM, nchekwa data akwụmụgwọ, nchekwa data akwụkwọ, ntọala onye ọrụ, yana nchekwa data nke ndị mmekọ. CRM nwere akụkọ ihe mere eme nke mmekọrịta onye ahịa ọ bụla site na oge ndebanye aha, gụnyere oku, nzukọ, ozi ịntanetị, ederede akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ na foto. Ebe nchekwa Ebe E Si Nweta nwere akụkọ ihe mere eme nke mgbazinye ego, gụnyere ụbọchị mbipụta, ego, ọnụego ọmụrụ nwa, usoro ịkwụghachi ụgwọ, nchikota nke iwu, ịkwụ ụgwọ, na ịkwụghachi kredit. Accountgụ ajụjụ nke azụmahịa na nchekwa data nchekwa agaghị ewe oge dị ka ngwa ọ bụla nwere ọnọdụ na agba ya, yabụ ị nwere ike ile anya nyochaa ọnọdụ ya ugbu a na-enweghị mmeghe akwụkwọ. Usoro a na-akwado ngosipụta agba nke ihe ngosi na ọnọdụ iji chekwaa oge ndị ọrụ. Agba ahụ gosipụtara ogo nke nsonaazụ chọrọ.
Usoro nyocha nke arụmọrụ kredit na - akwado nkwado nke ụdị elektrọnik. Ha nwere otu usoro ndochi, otu nkesa ozi, na ngwaọrụ njikwa. Ihe omume a na-enye nhazi nke onye ọrụ - ihe kariri nhọrọ 50 nke interface ma enwere ike ịhọrọ site na ịpịgharị. Ndị ọrụ nwere ntinye onwe ha na okwuntughe nchedo ha, nke na-enye ụdị elektrọnik nke onwe nke ọrụ na ọnụọgụ ozi ọrụ achọrọ. Nbanye na-etolite mpaghara ọrụ dị iche - mpaghara ọrụ nkeonwe, ebe data njirimara onye ọrụ niile gosipụtara nbanye, nke dị mma mgbe ị na-achọ onye na-amaghị ihe ọjọọ. Multi-ọrụ interface na-enyere aka dozie nsogbu nke nkekọrịta mgbe ọrụ na-eduzi imekotaotuugbo ọrụ dị ka esemokwu nke ịzọpụta data na-ekpochapụ. Usoro a n’onwe ha na - ewepụta akwụkwọ niile dị ugbu a, gụnyere okwu ego, nke enyere iwu maka onye na - achịkwa ya, akwụkwọ zuru ezu iji nweta kredit.
Ihe omume a na-ejigide ndekọ ndekọ ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu na njikwa arụmọrụ niile, nke na-eme ka o kwe omume ịme atụmatụ dị irè maka oge ọdịnihu, ịkọwapụta nsonaazụ. Dabere na ndekọ ọnụ ọgụgụ, a na-enyocha ụdị ọrụ niile, gụnyere nyocha nke ịdị irè nke ndị ọrụ, ọrụ ndị ahịa, na nrụpụta nke saịtị ahịa. Nnyocha nke ụdị ọrụ niile, nke enyere site na ngwụcha oge mkpesa ọ bụla, na-eme ka o kwe omume ịhazi usoro oge, ma bulie azụmaahịa ego. Ihe omume a na-akwado nkwukọrịta dị mma - nke ime na nke mpụga, na nke mbụ windo mmapụta, na nkwukọrịta kọmputa nke abụọ - ozi-e, SMS, Viber, na oku olu.